Dagon Movie Center! (ဒဂုံတက္ကသိုလ် ရုပ်ရှင်ရုံ): ကြောင် နှင့် ကြွက် (မြင့်မြတ်၊သက်မွန်မြင့်၊)(မြန်မာရုပ်ရှင်)
Dagon Movie Center! (ဒဂုံတက္ကသိုလ် ရုပ်ရှင်ရုံ)
Dagon University Friends Site မှ သူငယ်ချင်းများအားလုံးအတွက် ရုပ်ရှင်ရုံလေးဖြစ်ပါတယ်။သူငယ်ချင်းများအားလုံး ပျော်ရွှင်ပါစေ။
ဒဂုံတက္ကသိုလ် ရုပ်ရှင်ရုံမှ ကြိုဆိုပါတယ်။
ဒဂုံတက္ကသိုလ် ရုပ်ရှင်ရုံကို 21/9/09 (Monday) တွင် ဖန်တီးပါတယ်။ www.dagonuniversityfriends.org မှ သူငယ်ချင်းများအားလုံးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးဖန်တီးပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖွင့်ခါစဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့လည်း လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေပါသေးသည်။နားလည်ခွင့်လွတ်ပေးပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာကတော့ dagonuniversityfriends@gmail.com ဖြစ်ပါတယ်။
ကြောင် နှင့် ကြွက် (မြင့်မြတ်၊သက်မွန်မြင့်၊)(မြန်မာရုပ်ရှင်)
Posted by dagonuniversityfriends at 7:15 PM
WARMLY WELCOME TO DAGON UNIVERSITY FRIENDS!
Dagon Movie Center မှ ပြသပြီးသော ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ
All about love! (တရုတ်ကား)
who sleep with her? (Korea Movie)
Oh!Happy Day! (Korea Movie)!
Love Undercover (Korea Movie)!
Windstruck (Korea Movie)!
My Sassy Girl (Korea Movie)!
Lord Of The Rings (Two Towers)!
Spider Forest!(Korea Movie)
The Classic (Korea Movie)
My Tutor Friend!(Korea Movie)
Mr ans Mrs Smith!
High School Musical 1!
ကြောင် နှင့် ကြွက် (မြင့်မြတ်၊သက်မွန်မြင့်၊)(မြန်မ...
THE CUP! (ဘောလုံးဝါသနာရှင် တိဗက် ကိုရင်လေး ရုပ်ရှင...
HEAVENLY FOREST( JAPAN MOVIE Part 1/7)
HEAVENLY FOREST( JAPAN MOVIE Part 2/7)
HEAVENLY FOREST( JAPAN MOVIE Part 3/7)
HEAVENLY FOREST( JAPAN MOVIE Part 4/7)
HEAVENLY FOREST( JAPAN MOVIE Part 5/7)
HEAVENLY FOREST( JAPAN MOVIE Part 6/7)
HEAVENLY FOREST( JAPAN MOVIE Part 7/7)
9.56 or Apartment (Korea သည်းထိတ်ရင်ဖို ရုပ်ရှင်)
Inglourious Basterds!(ရုပ်ရှင်မင်းသား ဘရက်ပစ် ပါဝင...
အမှတ်တရစကားများ နဲ့ လာလည်ကြောင်းပြောခဲ့ပါနော်။
စာတမ်းတွေလေ့လာချင်ရင် ဖိုတိုရှော့လေ့လာချင်ရင် တားရော့ အီကိုဗားရှင်းဂျာနယ် အင်တာနက်ဂျာနယ် ဈေးကွက်ဂျာနယ် အခွင့်အလမ်းဂျာနယ် LifeStyle မဂ္ဂဇင်း People မဂ္ဂဇင်း ရွှေအမြုတေမဂ္ဂဇင်း သရဖူမဂ္ဂဇင်း လောကအလှမဂ္ဂဇင်း မြန်မာစွယ်စုံကျမ်း ၀ိညာဉ်သစ်စာကြည့်တိုက် နေ့သစ်စာကြည့်တိုက်
အဘိဓာန်(Eng to Myan) အဘိဓာန်(Eng to Eng) English Daily ကမ္ဘာစွယ်စုံကျမ်း မြန်မာ့အွန်လိုင်းစွယ်စုံကျမ်း For Myanmar Students National University Of Singapore Burmeseclassic Mayhninaye Shwedream Myanmar Planet Myanmar Mp3 MyanmarTimes Myanmar Cartoons Myanmar Cartoons01 Oversea Movies Asia Famous Movies Myanmar Football Journals ITE College MM IT Development Myanmar Bloggers Directory